डेभिड गुडिस।3उसका उपन्यासहरूको फिल्म अनुकूलनहरू वर्तमान साहित्य
डेभिड गुडिस ती लेखकहरु मध्ये एक हो डन, गाह्रो जीवन को र समय पहिले समाप्त। जन्मेको एक दिन जस्तै आज फिलाडेल्फिया १ 1917 १ in मा, तर 50० वर्षको उमेरमा मनोचिकित्सक अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो। उनी कलका २० उपन्यासहरूको लेखक थिए लुगा, तर उनले कालो विधाको जस्तो धेरै प्रतिनिधिसँग पनि हस्ताक्षर गरे पियानोवादकलाई गोली हान्नुहोस्, अँध्यारो मार्ग o रातमा। आज, उनको स्मृतिमा, म ती तीन शीर्षकहरूको समीक्षा गर्दछु त्यो लिइएको थियो चलचित्रहरूमा ठूलो सफलता संग।
1 पियानोवादकलाई गोली हान्नुहोस्
3 अँध्यारो मार्ग
पियानोवादकलाई गोली हान्नुहोस्
तिनीहरू भन्छन् यो हो उत्कृष्ट नमुना गुडिसको जुन आयु हो र निश्चित रूपमा यो कालो विधाको सबैभन्दा असाधारण उपन्यासहरू मध्ये एक हो। यो भित्र थियो 1960 जब फ्रान्सेली निर्देशक फ्रान्कोइस ट्रफौट उनको साथ चलचित्रमा लगे चार्ल्स Aznavour नायकको रूपमा।
कथा सिड बारमा सुरू हुन्छ फिलाडेल्फिया, जहाँ एक मानिस आफैं छेउमा पुग्छ र जो भाग्दै छ। खोज्नुहोस् कुर्कुच्चा, the pianista, जो उनको भाइ पनि हो। उनी धेरै वर्ष देखि उसलाई देखेको छैन र मद्दत र आश्रय लागि सोध्छन्। तर एडी कुनै कुरा जान्न चाहँदैनन् किनभने ऊ समस्या चाहँदैन।
त्यसपछि तिनीहरू देखा पर्छन् दुई बन्दुकधारी र एडीले सहयोग गर्न सक्दैन तर आफ्नो भाइलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्छ। तर ऊ पनि भाग्नु पर्छ र उसले यो लेनासँग गर्ने छ, एक रहस्यमय वेट्रेस र एक मात्र व्यक्ति जसले उनको वास्तविक पहिचान जान्दछ। उहाँ हुनुहुन्छ एडवर्ड वेबस्टर लिन, एक प्रसिद्ध कन्सर्ट परफॉर्मर पियानो जुन वर्ष पहिले धेरै सफल थियो। प्रश्न यो छ कि यो कसरी त्यस डम्पमा समाप्त भयो र यो हो नरक-आफ्नो अतीत को कुनै को पनि मेट्न मा बेन्ट.
यो शीर्षक पनि थियो शानदार अनुकूलन सिनेमा बाट जैक टुरिनरफ्रान्सेली मूलका निर्देशक, जसले सबै प्रकारका विधामा कसरी काम गर्ने जान्नु हुन्छ तर हस्ताक्षर गर्नुभयो फिल्म Noir मा सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ १ 40 s० र १ 50 s० को दशकको अन्तमा।
यस कथामा टुरर्नरले साहित्य सस्पेन्स र षड्यन्त्र राखेर ए जीवन्त ताल र उसको व्यक्तिगत दृश्य शैली, को एक सही प्रयोग द्वारा प्रबलित Flashback.
यसमा, र सुरुमा हामी नायकलाई भेट्छौं, जेम्स हराउँदै (a) Aldo किरण कठोरता र सहानुभूति को बिन्दुको साथ जुन उसलाई चरित्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ)। भ्यानिaएक डिजाइनर हो हामीलाई मात्र थाहा छ कि ऊ केहि बाट भागिरहेको देखिन्छ। कफि पसलमा एउटी महिलालाई भेट, मारी गार्डनर, एक मोडल द्वारा खेलेको एनी बानक्राफ्ट, जुन समस्यामा पनि देखिन्छ। उनीहरू बीचको सम्बन्ध उदाउँदछ जुन उनीहरू दुबैलाई मद्दत गर्दछ।
त्यो तब हुन्छ, भिन्नसँग फ्ल्यासब्याक, हामी कथा सिकिरहेका छौं। त्यसोभए हामी जान्दछौं कि माछा मार्ने कामको लागि फिल्ड ट्रिपमा भ्यानिंग र उसको साथी एडवर्ड गुर्स्टन डाँकुहरूको समूहमा ठक्कर खाए जसले भर्खर एउटा बैंक लुट्यो। तिनीहरूले एडवर्डको हत्या गर्दछन् र भ्यानिningलाई मृत अवस्थामा छोडिदिए। यद्यपि वाननिंग जीवित छ प्लस पैसा खोज्नुहोस् डकैती को। त्यस क्षणदेखि, उहाँ लामो समय सम्म कष्ट भोग्नुहुनेछ सतावट द्वारा डाकूहरू र पनि अधिकारीहरु, जुन तिनीहरू मुख्यको रूपमा औंल्याउँछन् शंकास्पद एडवर्डको मृत्युको।
भिन्सेन्ट पेरी (हम्फ्रे बोगार्ट), लाई गलत तरिकाले लाई आजीवन कारावासको सजाय उनको श्रीमतीको हत्या, आफ्नो निर्दोष प्रमाणित गर्न जेलबाट भाग्छ। ऊ भेट्छ आकर्षक अपरिचित कि उसले उसलाई मद्दत गर्ने छ किनभने उसको बुबा पनि न्यायिक त्रुटिको शिकार थियो।
त्यसोभए हामीसँग फिल्म Noir को क्लासिक विकास छ जहाँ नायकले गर्न आवश्यक छ पुलिसबाट भागेर आफ्नी स्वास्नीलाई कसले मार्यो भनेर पत्ता लगाउने क्रममा ऊ फेरि पक्राउ पर्नु भन्दा पहिले। र सामान्य ब्ल्याकमेलरहरू र घातक महिलाहरू बीच पनि, शैलीको क्लासिक्स।
चलचित्रले योमा हस्ताक्षर गर्‍यो डेलर डेभ, एक स्क्रिनराइटर जसले निर्देशन गर्न सुरु गरे र विशेषज्ञता प्राप्त गरे पश्चिमी कोमो O'clock बजेको रेल:10 o झुण्डिएको रूख तथापि, यो छ उमेर नराम्रो उनले अभिनय गरेका धेरै क्लासिकहरू भन्दा Bogart, हुनसक्छ स्क्रिप्टको कारण केहि वजनदार दृश्यहरू छन् तर हार्ड-टु-विश्वास संयोगको आधारमा।
तर यो अझै हेर्न लायक छ किनकि यो को बारे मा हो तेस्रो सँगै गोली हान्यो कि चार को फिल्म Bogart y लरेन ब्याकल। र यसले देखाउँदछ कि यो कोठा भर्नको लागि उनीहरूको लागि स्पष्ट रूपमा गरिएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » डेभिड गुडिस।3उनका उपन्यासहरूका फिल्म अनुकूलनहरू
मार्चको लागि editor सम्पादकीय अद्यावधिकहरू